mercredi, 11 novembre 2015 08:50
Fiara familiana ankavanana : Hiakatra fitsarana anio
Nitory ny Fanjakana ireo tompona fiara familiana ankavanana mitaky ny hanafoanana ny didim-pitondrana mandrara ireny fiara ireny tsy hivezivezy intsony. Handeha anio ny fitsarana mikasika io raharaha io.
lundi, 09 novembre 2015 17:43
Vaky fasana : Lasibatra ny tany Mangarano-Antsirabe II
Fasana iray no vaky ny faran’ny herinandro teo, ary noraofin’ireo jiolahy ny taolan-dava tamin’ny razana niisa 22. Naparitak’izy ireo kosa ny ambiny. Tsy mbola misy tratra ny tompon’antoka tamin’ity vaky fasana ity, mandray an-tanana ny fikarohana ny mpitandro ny filaminana. Saika manerana ny Nosy no andrenesana vaky fasana, ary tsy vao izao izany fa efa an-taonany maro saingy mirongatra izy io tato ho ato. Misy ny tratra, maromaro ihany izay, fa ny mampametra-panontaniana dia tsy fantatra na tsy ambara hatramin’izao ny mpandray ny taolampaty, ny ilana azy, sy ny toerana mpandray azy.
lundi, 09 novembre 2015 16:02
Marovoay: Mpitondra entana notafihin'ny jiolahy tamin'ny lakana teny ambonin'i Betsiboka
Raha eny amin'ny lalam-pirenenena no andrenesana mpanakan-dalana hatramin'izay dia hatramin'ny mpitatitra an-dranomamy koa izao no lasibatra. Ny sabotsy 7 novambra tamin'ny 2 maraina, nisy lakana nitondra entana ilain'ny mponina andavanandro notafihin'ny jiolahy valo nitondra lakana teny ambon'ny reniranon'i Betsiboka, raha niala tao Marovoay hiazo an'i Manaratsandry. Nanavo-tena ny iray tamin'ireo telo lahy niaraka tamin'ilay lakana nitondra entana, ny roa no nisedra ny herisetran'ireo jiolahy. Hita omaly alahady ny fatin'ireo roalahy, lasan'ireo jiolahy avokoa ny entan'izy ireo.
lundi, 09 novembre 2015 15:31
Fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina
Andeha hanainga anio i Dr SHANNON SMITH Vice-secrétaire d'Etat Adjoint Bureau des affaires Africaines, raha nijanona teto nandritran'ny fotoana maharitra, nandinika manokana ny eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ireo tsy fahandriampahalemana moa no antondiany teto.Valan-dresaka niarahana tamin'ireo mpanao gazety teny amin'ny American Center Tanjombato no nahampalalany fohifohy ny asa izay nosahaniny tamin'izany.
lundi, 09 novembre 2015 15:27
Nahampafantarina androany ny fisian'ny karatra vaovao eo anivon'ny polisy nasionaly izay hampiarina manomboka rahampitso, eo ihany koa ny karazana fampiasana ireo logiciels manamarina ny andraikitr'ireo polisy amperin'asa sy ny mombamomba azy na ny Gestion de ressources humaines izany.
lundi, 09 novembre 2015 09:07
FLM Sambava : Nisokatra indray fa mbola nizara ny mpiangona
Nivoha ho azon’ny Kristianina nivavahana ny fiangonana FLM Sambava, omaly alahady 8 novambra, rehefa nakaton’ny Fanjakana telo herinandro lasa izay, noho ny disadisa taorian’ny famindran-toerana ny pastora tao. Ny fiangonana anefa no nisokatra fa ny mpiangona mbola nizara roa raha ny omaly, ny ampahany maro tao ampiangonana, fa ampahany faharoa nivavaka tany amin’ny Business Center.
Analakely Petite Vitesse : Mpanendaka efa mpamerin-keloka tra-tehaka indray
Mpanendaka mpandrava eny amin’ny Petite Vitesse, Soarano, Analakely ary Tsaralalana iny no tra-tehaky ny Polisy teo am-panaovana ny asa ratsiny omaly. Efa mpamerin-keloka izy ireo, efa nisy in-droa nifonja nefa mbola tratra indray. Mbola tratra tany amin’izy ireo koa ireo zava-maranitra fampiasan’izy ireo. Natolotra ny fampanoavana androany sabotsy izy dimy lahy ireo, ary notanana am-ponja vonjimaika.
WC Public Sambava
samedi, 07 novembre 2015 10:46
Fidiovana : Mikatom-potsiny ny «WC public» any Sambava
Raha ilaharana ny «WC public» aty an-drenivohitra, jerem-potsiny tsy misy mpampiasa, hany ka itangoronan’ny vovoka ny any Sambava nefa nandaniam-bola. Mbola entim-pahazarana manao diky ankalamanjana eny amonon-dranomasina ny ankamaroan’ny mponina.
vendredi, 06 novembre 2015 18:14
Tolagnaro : Amidin’ny tantsaha manta ny lodsia
Otazan’ny tantsaha manta mba hamidy eny an-tsena ny lodsia any Tolagnaro. Entin’ny tsy fisiam-bola nefa ny hanin-kohanina sy ny fitaovan’ny mpianatra tsy maintsy vidiana no voalaza fa antony. Ankoatra izay dia tsy misy mpanangom-bokatra ihany koa any ka dia ifandrombahana ny fahatongavana aloha eny an-tsena hamadihana vola ny vokatra lodsia. Ny tsikaritra aloha dia somary madinika tsy toy ny isan-taona ny voana lodsia miakatra.
vendredi, 06 novembre 2015 11:13
Hetsika fahadiovana sy fidiovana
Mbola miara-miasa amin'ny ministeran'ny serasera ireo sefo fokotany ao amin'ny boriboritany fahadimy. Fiaraha-miasa mitohy ao anatin'ny hetsika fahadiovana sy fidiovana.
Page 620 sur 638